Swiiti anwụrụ Ọkwa 410 Ndị aghụghọ na Atụmatụ - Egwuregwu swiiti anwụrụ - Free Ndụ Ndụ Atụmatụ Ndị na-egosi
Ị nọ ebe a: Ulo / Dulite Crush aghụghọ / Swiiti anwụrụ Ọkwa 410 Ndị aghụghọ na Atụmatụ
Nri swiiti anwụrụ siri ike bụ nri anaghị atọ mmadụ niile ụtọ. Mana maka ndị na - eme ya, anyị ji n'aka na ọtụtụ ọkwa dị ebe ha nwere ike inwe obi ụtọ a. Agbanyeghi na enwere ihu igwe siri ike ma nwekwaa nsogbu gbara ghari ndi ahu dika ndi n’amaghi ama na iti mkpu, machibido Smartphone na ịlele ya ka oge na-aga maka mmebi ọ bụla, a ka na-anụ ha ụtọ nke ukwuu. Iji dozie otu ụdị ọkwa ahụ, anyị na-ewetara Candy Crush Level 410 Ndị aghụghọ na Atụmatụ.
Jellies bụ ndị iro zuru ụwa ọnụ nke ndị egwuregwu Candy Crush. A na-akpọ jellies, frosting, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, A na-etinye ha mgbe niile na ebumnuche larịị ma ọ bụrụ na ha dị. Ihe na - eme ka ọ ka njọ bụ na ọ bụrụ na ọdịdị nke ọkwa ahụ nwere akụkụ a na - enweghị ike iru na ihe mgbochi ndị ọzọ na - eme ka ihe 'bụrụ ihe na - adọrọ mmasị'..
Ebumnuche nke ọkwa 410 dị mfe ikwupụta. Bibie ihe niile 70 jellies na akara 150,000 isi; ihe a niile n’ime 50 Nkea. Ọ bụ ezie na ọnụọgụ nke ngagharị dị elu nke ukwuu, enwere bọmbụ na 30 na-akpali oke na ndị na-eme chọkọletị na ala nke na-eme ọkwa a dị ka ọ dị ụtọ kama ọ bụ n'abali.
Swiiti anwụrụ Ọkwa 410 Ndị aghụghọ na Atụmatụ:
Ọ dịghị mkpa ka frown, ka anyi g’enweta ya ihu. Soro ndụmọdụ na usoro ndị a dị mfe iji kpochapụ ọkwa a, atụkwala egwu ịnyetụ ole na ole. Anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-amụta na ọdịda anyị. Yabụ, na-enweghị n'ihu ado, ka anyị ghaa:
Nke mbu, legide anya na ihe na-eme na ala karịa elu. Ọbụghị naanị nke a ga - enyere gị aka ịme mkpebi ndị ka mma kamakwa ọ ga - enyere gị aka ịme swies pụrụ iche nke ị ga - achọpụta, bụ ihe bara uru na ọkwa a.
Ị naanị 30 tupu bọmbụ ndị ahụ gbawara, yabụ kpachara anya kpochapụ ha. Nwere ike ịnwere kandụl mgbe niile mgbe ọ bụla o kwere omume, ma ọ bụ ịnwere ike iji candies pụrụ iche na mgbakwunye iji wepụ swiiti na jellies otu oge.
Nhọrọ kacha mma ị ga-eme bụ ijikọkọta ụzọ atọ maka mmetụta kachasị, nke a gụnyere ịgafe bọmbụ gbara agba ma ọ bụ kandụl kechiri, na-agafe bọmbụ agba abụọ n’otu, ma ọ bụ ịgafee swiiti a wara akara. Nke a ga - enyere gị aka ị wepụta ọtụtụ jell na bọmbụ ndị siri ike iru n'akụkụ.
Cheta onye choko choko na ala? Ọ dị mma, ọ ga na-eme chocolate na ọkwa ahụ. Jide n'aka na ị na-agbapu chocolate na oge site n'oge ruo n'oge ma ọ bụ ọ ga-eto nke ọma ma mee ka o sie ike ịmepụta candies pụrụ iche. Ọ nwekwara ike ilo swiiti pụrụ iche, na-atụfu gị kpamkpam.
N’ikpeazụ, maka ndi siri ike iru nkuku, nhọrọ kachasị gị mma bụ imepụta na iji candies pụrụ iche na njikọta iji wepụta jelii na ntụpọ ndị ahụ. Ndị na-egwu egwuregwu na-enwekarị ike ikpochapụ ọkwa niile mana ọ tọgbọrọ n'ihi jellies n'akụkụ nkuku.
Ọ bụ ihe niile gbasara ịhazi mmegharị gị ziri ezi na ịtụle mmetụta nke ihe ndị na - eme na gburugburu. Hụ unu ụmụ nwoke n’oge ọzọ; ruo mgbe ahụ, nọrọ ụtọ!!!